ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွန်းအားများ၊ ခံစားချက်များနှင့်အပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေများနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဆင်းရဲဒုက္ခများပျံ့နှံ့ခြင်း (၂၀၁၈) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
Janna အေ Dickenson, ပါရဂူဘွဲ့1; Neil Gleason, MA1; Col လိ Coleman, ပါရဂူဘွဲ့1; et al Michael H. Miner, PhD1
ဂျေအေအမ်အေ Netw ပွင့်လင်း။ 2018; 1 (7): e184468 ။ Doi: 10.1001 / jamanetworkopen.2018.4468
မေးခွန်း အခက်အခဲတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားရှိခြင်းနဲ့ဆက်စပ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ, ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုအမေရိကန်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားပျံ့နှံ့မှု, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူတွေကဘာလဲ?
တွေ့ရှိချက်များ ဒီစစ်တမ်းလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာ (အမျိုးသမီးများ 8.6% နှင့်ယောက်ျား၏ 7.0%) ၏ 10.3% ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာရောက်သောအဆင့်ဆင့်နှင့် / သို့မဟုတ်အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထား, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ချို့ယွင်းထောက်ခံကြောင်း။ တှေ့ရှိ
အဓိပ်ပာယျ ထိုကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာတွေ၏မြင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ sociocultural ပြဿနာအဖြစ်အဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆက်စပ်မှုရှိပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများကအသိအမှတ်ပြုခံရသင့်ကြောင်းသိသိသာသာလက်တွေ့ပြဿနာဖော်ပြသည်။
အရေးကြီးပုံ အဆိုပါ veracity, nomenclature နှင့်လိင်စွဲလမ်း၏ Conceptual, Out-of-ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, hypersexual အပြုအမူနှင့်ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကျယ်ပြန့်အခြေအတင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ စိတ်ကူးထိုသို့သောအပြောင်းအလဲနေသော်လည်းအားလုံးမော်ဒယ်များကတော့ထင်ရှားတဲ့အင်္ဂါရပ်အပေါ် concur: လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲနှင့် / သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်စေသည်တစ်လမ်းအတွက်တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုနှင့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့ပျက်ကွက်။ သို့သော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြဿနာများ၏ပျံ့နှံ့မသိနိုင်ပါဘူး။
ရည်ရွယ်ချက် ဒုက္ခဆင်းရဲများပျံ့နှံ့အကဲဖြတ်ရန်နှင့်အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ချွတ်ယွင်း, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာအကြားအပြုအမူရန်။
ဒီဇိုင်းပြင်ဆင်မှုအားနှင့်ပါဝင် ဤသည်မှာစစ်တမ်းလေ့လာမှု, အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း၏ပျံ့နှံ့အကဲဖြတ်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အပြုအမူအချက်အလက်များ၏အမျိုးသားစစ်တမ်းကိုအသုံးပြုတိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူများနှင့်ပျံ့နှံ့ sociodemographic variable တွေကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားပုံကိုဆုံးဖြတ်သည်။ 18 နှင့် 50 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြားသင်တန်းသားများကိုကျပန်းနိုဝင်ဘာလ 50 အားလုံးကို 2016 အမေရိကန်ပြည်နယ်များထံမှနမူနာခဲ့ကြသည်။
အဓိကရလဒျနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနှင့်ချို့ယွင်းအခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူဟာ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory-13 သုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ 35 မှ0တစ်စကေးအပေါ် 65 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ရမှတ်ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာရောက်သောအဆင့်ဆင့်နှင့် / သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းညွှန်ပြ။
ရလဒ်များ 2325 အရွယ်ရောက်သူ (1174 [50.5%] အမျိုးသမီး; ယုတ် [SD က] အသက်, 34.0 [9.3] အနှစ်), 201 [8.6%] 35 ဒါမှမဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ရမှတ်၏လက်တွေ့မျက်နှာပြင်ဖြတ်အမှတ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျား, မကွဲပြားမှုယောက်ျား၏ 10.3% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 7.0% ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာရောက်သောအဆင့်ဆင့်နှင့် / သို့မဟုတ်အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ချွတ်ယွင်း, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူလက်မှတ်ရေးထိုးနှင့်အတူယခင်ကဆိုခဲ့ထက်သေးငယ်ခဲ့ကြသည်။
ကောက်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါနှင့်ဆက်စပ်ဒီထင်ရှားတဲ့အင်္ဂါရပ်၏မြင့်ပျံ့နှံ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေနေသောလူမျိုး၏မြင့်အရေအတွက်သတိပေးချက်ဖြစ်ဂရုတစိုက်ယင်း၏ sociocultural အခြေအနေတွင်အတွင်းပြဿနာ၏သဘောသဘာဝအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သင့်တော်သောကုသမှုကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
က Tiger Woods ကနေ Harvey Weinstein ဖို့, သတင်းဆောင်းပါးများ "ကပ်ရောဂါ" "လိင်စွဲလမ်း" ဟုစိုက်ပျိုးမှုနှင့်တခါမျှအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရကြောင်း conjectured ပါပြီ1 သိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်းထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုပင်တည်ရှိခြင်းရှိမရှိအငွငျးပှားနေစဉ်။ Psychiatry hypersexuality သွင်ပြင်လက္ခဏာများရန်ကြိုးစားနေ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိပါတယ်ပေမယ့်, သုတေသီများနှင့် Clinician ကစစ်မှန်တဲ့စိတ်ရောဂါရောဂါကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ် (အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ပိုကြီးတဲ့ sociocultural ပြဿနာမျှသာပြဆိုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မတူညီသောအမြင်များရှိ Of-ထိန်းချုပ်မှုထွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ2) ။ ထိုမှတပါး, စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာစိတ်ကူးနှင့် ပတ်သက်. သဘောထားကွဲလွဲ, etiology နှင့် nomenclature (ဥပမာရှိခဲ့သည်, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ [CSB]3hypersexual ရောဂါ,4လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ,5 နှင့် Of-ထိန်းချုပ်မှုထွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ2).6 လက္ခဏာတင်ဆက်မှုကိုလည်းခက်ခဲအမျိုးသားရေးပျံ့နှံ့၏တိကျသောခန့်မှန်းချက် rendering, Conceptual ဖြတ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။7 အကျိုးဆက်အားသိပ္ပံပညာရှင်များ '' စွမ်းရည်ကိုမျက်မြင်လက်တွေ့ CSBa"ကိုကြီးထွားလာကပ်ရောဂါ" ကြောင်းပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ supposition ၏ veracity ဆနျးစစျဖို့1 ကန့်သတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
, သိသိသာသာအခက်အခဲတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားရှိခြင်းတိုကျတှနျးထားသနှင့်ဆေးပညာသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲများအဆင့်ဆင့်နှင့် / သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းဖြစ်စေသောအပြုအမူ: စိတ်ကူးနှင့်မည့်နှင့် ပတ်သက်. သဘောတူညီမှု၏ထိုကဲ့သို့သောမရှိခြင်းနေသော်လည်းအားလုံး Conceptual ဘုံအင်္ဂါရပ်မျှဝေပါ။ ဒီ key feature ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, အတွက်တရားဝင်ရောဂါအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိခဲ့သည့်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (CSBD) ၏အသစ်ကခွဲခြား၏အခြေခံဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး, ဒသမတည်းဖြတ်မူ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်၏အတန်းအောက်မှာ။7 အထူးသ CSBD သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်လူမှုရေးချွတ်ယွင်းဖြစ်စေသောထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ရလဒ်များအရာပြင်းထန်သောထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, ရမ္မက်ကိုထိန်းချုပ်ပျက်ကွက်တဲ့ဇွဲပုံစံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချို့ယွင်းတစ်ဦးချင်းစီသူသို့မဟုတ်သူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့်အနည်းငယ်မျှသာပျော်မွေ့ဟုတထစ်ချလျှင်ပင်, လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျန်းမာရေးလျစ်လျူရှုထားအကြိမ်ကြိမ်မအောင်မြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နှင့်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆက်လက်သို့မဟုတ်ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ CSBD ၏ခွဲခြားနှင့်ကိုက်ညီအဓိပ္ပာယ်များ၏ရှေ့မရှိခြင်း၏ recency ပေးထားကျနော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကောက်ယူခဲ့ကြသောဤရောဂါ၏အဘယ်သူမျှမစနစ်တကျ epidemiological လေ့လာမှုကိုငါသိ၏။ ထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ခြင်းတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အမြင်၏ကြမ်းတမ်းခန့်မှန်းချက်အခြားနိုင်ငံများတွင်ရယူပြီ,8 နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အမျိုးသားရေးပျံ့နှံ့သေးငယ်တဲ့နမူနာအပေါ်အခြေခံပြီးခန့်မှန်းထားသည်။4,7 ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများအတော်လေးအနည်းငယ်တစ်ဦးချင်းစီထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အတွေ့အကြုံဒုက္ခဆင်းရဲနှင့် / သို့မဟုတ်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြောင့်ချို့ယွင်းထဲကအဖြစ်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရိပ်မိကြောင်းညွှန်ပြကြသည်။ 1 မှ 6:2အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ပျံ့နှံ့ 1 ကနေအမျိုးသမီးအချိုးတစ်ခုမျှော်မှန်းအထီးနှင့်အတူ, လူကြီးများအတွက်%5မှ 1% ကနေအထိခန့်မှန်းထားသည်။4,7 အခက်အခဲတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း၏ပျံ့နှံ့မှုအကဲဖြတ်, United States နှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံပတျဝနျးကငျြအဓိပ္ပာယ်နှင့်တိကျသောလက္ခဏာတင်ဆက်မှုအတွက်စနစ်တကျ epidemiological လေ့လာမှုများ၏ရှားပါးမှုအခက်အခဲ, တိုကျတှနျးထားပေးသည်နှင့်အပြုအမူမှာမရရှိနိုင် CSBD ၏အရင်းနှီးဆုံးလူဦးရေ-based ခန့်မှန်းချက်ကိုထောက်ပံ့ပေး ဒီအချိန်။
လက်ရှိလေ့လာမှု (ကတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာဖို့ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory-13 (CSBI-13) စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဤသော့ချက်အင်္ဂါရပ်များပျံ့နှံ့အကဲဖြတ်ထားပါသည်ဂဏန်း) ။ အဆိုပါ CSBI-13 ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ပြင်းထန်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်စိစစ်တူရိယာအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။9,10 လက်ရှိ 13 ပစ္စည်းများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခံစားစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းတစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး) CSBD ၏အဆိုပြုစံ Parallel နှင့်တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ရိပ်မိအခက်အခဲများ၏ပြင်းထန်မှုအကဲဖြတ်ရန်, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူများနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲများဒီဂရီနှင့် ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်း (လူမှုရေး, လူ့နှင့်လုပ်ငန်းခွင်အကျိုးဆက်များ) ။11 လက်ရှိတွင် CSBI-13 တိကျစွာတွေ့ဆုံရန်နှင့်အသီးသီးအခြိနျများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ CSB syndrome ရောဂါ 72% နှင့် 79% များအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်မလိုတဲ့သူတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့တစ်ခုထူထောင်လက်တွေ့ဖြတ်အချက်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောတည်ဆဲစိစစ်တူရိယာဖြစ်ပါတယ်။11 CSBD ၏ကြိုတင်အမေရိကန်ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့လူဦးရေရဲ့% 1 မှ 6% ကိုလက်တွေ့ဖြတ်အမှတ်အမျိုးသမီးတွေပါလိမ့်မယ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသောသူတို့၏အမျိုးအ% 13 ဖို့ CSBI-20 နှင့် 30% ၏လက်တွေ့ဖြတ်မှတ်ဖြည့်ဆည်းမည်ဟုတွေးဆ။
ဒေတာကိုပြည်သူ့ထင်မြင်ချက်သုတေသနများအတွက်အမေရိကန်အသင်း (အောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အပြုအမူများ၏လူဦးရေ-based အမျိုးသားစစ်တမ်း (NSSHB) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်စုဆောင်းခံခဲ့ရAAPORစစ်တမ်းလေ့လာမှုများအတွက်) အစီရင်ခံလမ်းညွှန်။ အဆိုပါ NSSHB လေ့လာမှု 18 နှင့် 50 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြားအမေရိကန်လူဦးရေအကြားတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများဆနျးစစျဖို့ဒီဇိုင်း (နှစ်ပေါင်း 34.0 [9.3], [SD က] ပါဝင်သူအသက်ဆိုလို) နှင့်လူအပေါင်းတို့ 50 ပြည်နယ်နှင့်ကိုလံဘီယာ၏ခရိုင်အနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို NSSHB လေ့လာမှုများ၏ယခင်လှိုင်း2ပြီးစီးခဲ့သောသူလူကြီးများရဲ့ယေဘုယျလူဦးရေထဲကနေနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ယေဘုယျအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေရဲ့တစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့နမူနာအနေဖြင့်နိုဝင်ဘာလ 2016 အတွက် 1 ရက်သတ္တပတ်တစ်ထွာကျော် KnowledgePanel (GfK သုတေသန) သုံးပြီးစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးပစ်မှတ်အုပ်စုများထံမှသင်တန်းသားများကိုကျပန်းဖြစ်နိုင်ခြေ-based နမူနာမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြခြင်း, လိုအပ်လျှင်အိမ်ထောင်စုအင်တာနက် access ကိုနဲ့ hardware တွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။12 ဤနည်းလမ်းကိုအပြည့်အဝကိုယ်စားလှယ်နမူနာလေ့လာမှုလူဦးရေအဘို့အကစာရင်းအင်းခိုင်လုံသောအခြထုတ်လုပ်ရန်ထုတ်ပေးနိုင်သည့်အနေဖြင့်အကြီးဆုံးအမျိုးသားရေးနမူနာ frame ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအဘို့နမူနာခဲ့ကြသည်သောသူတို့၏အမျိုးအ, 51% (2594) သူတို့လေ့လာမှုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ရှိရာက်ဘ်ဆိုက်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်လေ့လာမှုအတွက်အတိုးကိုလိုက်ကြ၏။ ဤအလူတစ်ဦးချင်းစီ၏, 94% (2432) အသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးနှင့်အသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးသူမြား၏ 95.6% (2324) ကို CSBI-13 ပြီးစီးခဲ့သည်။ အဆိုပါ NSSHB ဟာ Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory
အလုပ်လုပ်တဲ့ချို့ယွင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အခက်အခဲတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထား, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲ: အဆိုပါ CSBI-13 CSBD ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်တဲ့စိစစ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။10 အဆိုပါ CSBI-13 လုံလောက်သောယုံကြည်စိတ်ချရ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစံနှုန်းတရားဝင်မှု, နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့် convergence တရားဝင်မှုရှိသည်ဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။11 အဆိုပါ CSBI ၏ယခင်ဗားရှင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏အမျိုးမျိုးသောလူဦးရေအတွက်စမ်းသပ်ပြီးပြီ13-17 နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်။17,18 သင်တန်းသားများကိုကို (13 ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုဘယ်လောက်ရှိသလဲဂဏန်း)5(ဘယ်တော့မှ) မှ 1 (အလွန်မကြာခဏ) အထိတစ်ဦး 5-အမှတ်စကေးပေါ်မှာ။ စုစုပေါင်းစကေးရမှတ်ပစ္စည်းများတလွှားကဉျြးခြုပျအားဖွငျ့တွက်ချက်ထားသည်။ 35 သို့မဟုတ် သာ. ကွီးမွတျ၏တစ်ဦးကရမှတ် CSBD ၏အဆိုပြုအဖြေရှာတဲ့စံကိုထင်ဟပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေ CSB လက်တွေ့ syndrome ရောဂါများအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်သူကိုကွဲပြားတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အထိခိုက်မခံတဲ့ခြင်းနှင့်တိကျသောဖြတ်အချက်ဖြစ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။11 အဆိုပါ CSBI-13 CSBD ၏သစ်ကိုခွဲခြားရန်ကြိုတင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Self-အစီရင်ခံစာစိစစ် tool တစ်ခုဖြစ်သည်သောကြောင့်, တစ်ဦး 35 ၏ရမှတ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသော CSBD များ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသိရှိနိုင်ရန်ဖို့နောက်ထပ်အကဲဖြတ်အဖြေရှာတဲ့စံများနှင့်ရမ်းတွေ့ဆုံ၏မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေဖော်ပြသည်။
အသက်, ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးရေး, ပညာရေးနှင့်အိမ်ထောင်စုဝင်ငွေ GfK ရဲ့ panel ကစုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ဝင်ငွေခွန်အမျိုးအစားထက်နည်း $ 5000 ကနေ $ 250 000 အထိသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအစီရင်ခံခဲ့သည်။ $ မှ $ 25 000, $ 25 000 မှ $ 49 999 မှ $ 50 000 မှ $ 74 999 ထက်လျော့နည်း, $ 75 000, $ 99 999, $ 100 000: ဝင်ငွေအောက်ပါအမျိုးအစားသို့ပြိုကျခဲ့သည် ORDINAL အမျိုးအစားအရေအတွက်ပေးထား 150 000 နှင့် $ 150 000 ထက်ပို။ အလားတူပင်, ပညာရေးအဆင့်အထိအမျိုးအစားစုဆောင်းခံခဲ့ရခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အောက်ပါအမျိုးအစားသို့ပြိုကျခဲ့သည်: အထက်တန်းကျောင်းပညာရေး, အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာသို့မဟုတ်ညီမျှအချို့ကောလိပ်သို့မဟုတ်တွဲဖက်ဘွဲ့, ဘွဲ့နှင့်မဟာဘွဲ့သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသည်ထက်လျော့နည်း။ ဖြေဆိုသူအောက်ပါ options များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏လူမျိုးစု / မျိုးနွယ်ကိုရှေးခယျြ: Non-ဟစ်စပန်းနစ်ဖြူ; အနက်ရောင်, Non-ဟစ်စပန်းနစ်; Non-ဟစ်စပန်းနစ်မျိုးစုံလူမျိုး, နှင့်ဟစ်စပန်းနစ်။ စစ်တမ်းကာလအတွင်းသင်တန်းသားများကိုယောက်ျား, မိန်းမ, transman, ဒါမှမဟုတ် transwoman အဖြစ်၎င်းတို့၏ကျားမှတ်ချက်ချသည်။ Transgender များအဖြစ်ဖော်ထုတ်မှသာ4တစ်ဦးချင်းစီ, လိင်တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကျားမဝိသေသလက္ခဏာအရသိရသည်ခွဲခြားခံရကြ၏။ သင်တန်းသားများကိုလည်းလိင်ကွဲ, ရိုးရိုး, လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူ, asexual, ဒါမှမဟုတ်အခြားတစ်ခုခုအဖြစ်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်ကပ်ထားပါတယ်။ အဖြစ် asexual သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုခုဖော်ထုတ်သူများသည်ထိုအတံဆိပ်များ၏အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းအားပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားရှိခြင်းနဲ့ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ထောက်ခံတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ပျံ့နှံ့မှု, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူဖော်ပြရန်သုံးပြီး CSBI-95 အပေါ် 35 သို့မဟုတ်မြင့်မားသောသွင်းယူတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏ 13% ယုံကြည်မှုကြားကာလအတူအချိုးအစားအဆုံးအဖြတ်အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည် SPSS စာရင်းအင်း software ကိုဗားရှင်း 22.0 (IBM က) တွင်စာရင်းဇယားများ။ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့် CSBI-13 ၏လက်တွေ့ဖြတ်မှတ်ဖြည့်ဆည်းမပေးခဲ့ပါဘူးသူကိုတစ်ဦးချင်းစီအကြားဝိသေသလက္ခဏာများရာခိုင်နှုန်း (အမျိုးအစား variable တွေကို) သို့မဟုတ်နည်းလမ်း (စဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကို) အဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ , χအမျိုးမျိုးသော sociodemographic ဝိသေသလက္ခဏာများ (ဥပမာ, လိင်, ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးစုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်) ဖြတ်ပြီး CSBI-13 ၏လက်တွေ့ဖြတ်အမှတ်တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏အချိုးအစားအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်2 စာရင်းဇယားတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ သိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက် (2 တဖက်သတ် P <.05) ထပ်မံအမျိုးမျိုးသော sociodemographic variable တွေကိုဖြတ်ပြီးမှုနှုန်းအချိုးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုခန့်မှန်းရန် log-link ကို function ကိုအတူ binary ဆုတ်ယုတ်သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
နမူနာများနှင့် nonsampling အမှား၏သတင်းရင်းမြစ်ပြင်ပေးဖို့, လေ့လာမှုနမူနာအမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုကနေလတ်တလောလက်ရှိလူဦးရေစစ်တမ်းကနေလူဦးရေဖြန့်ဝေသုံးပြီး poststratification ချိန်ညှိနှင့်အတူတညျ့ခဲ့သည်။19 ဤရွေ့ကားချိန်ညှိလက်ရှိလေ့လာမှုများအတွက်နမူနာထူထောင်ဘို့အရွယ်အစားရွေးချယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေအချိုးကျများတွင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ panel ကအခြေစိုက်စခန်းအလေးချိန်ခဲ့သည်။12 ဒီလေ့လာမှုမှာတင်ဆက်အားလုံးဒေတာသည်ဤအလေးကိုအသုံးပြုပါ။
သင်တန်းသားများကို (N ကို = 2325) (male- နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို-များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏နီးပါးနှင့်ညီမျှနံပါတ်များကို (18 [50%] အမျိုးသမီး) နှင့်အတူ ([SD က] အသက်, 34 [9.26] အနှစ်ကိုဆိုလိုတာ) 1174 နှင့် 50.5 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြားဖြစ်ကြသည်စားပှဲ) ။ ပညာရေးအပေါ်ဖော်ပြရန်ဒေတာ 10.8% (251 သင်တန်းသားများကို) အထက်တန်းကျောင်းဖြည့်စွက်မပြုခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ, 26.8% (622) အထက်တန်းကျောင်းပြီးစီးခဲ့, 30.7% (713) အချို့သောကောလိပ်ကျောင်းပြီးစီး, 19.4% (450) (ဘွဲ့ရရှိခဲ့နှင့် 12.4% 289) တဲ့ professional ဒီဂရီရရှိခဲ့သည်။ ဝင်ငွေနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အတူ, 19.7% (458) (25) $ 000 41.0 ထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့် 953% ရရှိခဲ့သည်ပိုပြီး $ 75 000 ထက်ဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲနှင့်လူမျိုးစုရာမှာ, 19.8% (455) ဟစ်စပန်းနစ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်; 58.4% (1358), အဖြူရောင် Non-ဟစ်စပန်းနစ်သကဲ့သို့, 12.7% (296), အနက်ရောင် Non-ဟစ်စပန်းနစ်သကဲ့သို့, 1.6% (36) မျိုးစုံလူမျိုး, Non-ဟစ်စပန်းနစ်သကဲ့သို့, နှင့်အခြား Non-ဟစ်စပန်းနစ်အဖြစ် 7.7% (179) ။ သင်တန်းသားများကို၏ 91.6% စုစုပေါင်း (2128) အခြားအရာတစ်ခုခုအဖြစ်လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူနှင့် 4.4% (101) အဖြစ်လိင်ကွဲ, 2.6% (60) ကဲ့သို့ရိုးရိုး, 1.4% (33) မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ စားပှဲ ပြနှင့်၎င်းတို့၏သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်နှင့်အပြုအမူအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုဖြတ်ပြီးပျံ့နှံ့နှုန်းကွဲပြားခြားနားမှုတွေနဲ့ဆက်စပ်ရောက်သောဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ပြခဲ့ပါဘူးသူကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီး sociodemographic ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဖြန့်ဖြူး delineates ။
အဆိုပါပျံ့နှံ့အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာရောက်သောအဆင့်ဆင့်နှင့် / သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းလက်မှတ်ရေးထိုး၏နှုန်းကတိုကျတှနျးနှင့်အပြုအမူ (CSBI-13 ရမှတ်≥35) 8.6% (95% CI, 7.5% -9.8%) ဖြစ်ခဲ့သည် (201 သင်တန်းသားများ ) ။ လူတို့တွင်, 10.3% (119) အမျိုးသမီးတွေ (7.0 ပါဝင်သူ) ၏ 82% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာရောက်သောအဆင့်ဆင့်နှင့် / သို့မဟုတ်အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ချွတ်ယွင်း, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူထောက်ခံ။ ယောက်ျား 1.54 အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ရောက်သောသိသိသာသာအဆင့်ဆင့်ထောက်ခံဖို့ပိုဖွယ်ရှိ (95% CI, 1.15-2.06) ကြိမ်, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူ (χကြပေမဲ့2 = 8.32, P = .004), အမျိုးသမီးများသည်လက်တွေ့မျက်နှာပြင်ဖြတ်မှတ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ထက်ဝက်နီးပါး (40.8%) အဘို့မှတ်။
အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု, တိုကျတှနျးထားသနှင့် sociodemographic ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖြတ်ပြီးအပြုအမူတွေကိုထပ်မံ Logistic ဆုတ်ယုတ်နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ဝင်ငွေနှင့် ပတ်သက်. ကျနော်တို့အလေးသာ (ဝင်ငွေနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီလျော့နည်း $ 25 000 $ 25 000 မှ $ 49 999 ၏ဝင်ငွေနှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားအခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း၏လေးသာမှု, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူခဲ့ထက်တွေ့ရှိခဲ့ $ 3.38 95 (OR, 2.06 မှ 5.55% CI, 50-000), $ 74 999;; $ 4.01 95 (OR, 2.37 မှ 6.81% CI, 75-000), $ 99 999; အချိုး [OR] 1.80 95 1.15% CI, 2.82-100), နှင့် $ 000 150 (OR, 000 ထက်ပို;; $ 4.08 95 (OR, 2.41 ဖို့% CI, 6.93-150), $ 000 1.67 95% CI, 1.08-2.59) ။ ထို့အပြင် $ 75 000 အကြားဝင်ငွေနှင့်အတူထိုနှင့် $ 100 000 $ 25 000 နှင့် $ 50 000 (OR, 1.88 အကြားဝင်ငွေနှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း၏မြင့်မားသောအလေးသာခဲ့တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူ; $ 95 1.12 (OR, 3.16 မှ 50% CI, 000-75), နှင့် $ 000 2.23;; $ 95 1.29 (OR, 3.88 မှ 100% CI, 000-150), $ 000 2.27 95% CI, 1.31-3.95 ) ။ အလားတူပင်ဝင်ငွေရှိသူများပိုမိုမြင့်မား $ 150 000 $ 25 000 နှင့် $ 50 000 (OR, 2.02; 95% CI, 1.22-3.36) အကြားဝင်ငွေနှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားလေးသာရှိခဲ့ထက် $ 50 000 ရန်, $ 75 000 (OR, 2.40; 95% CI, 1.40-4.13), နှင့် $ 100 000 မှ $ 150 000 (OR, 2.44; 95% CI, 1.42-4.20) ။ (; 0.48% CI, 95-0.30 OR, 0.76), တချို့ကောလိပ် (OR, 0.65; 95% CI, 0.42-0.99), ဘွဲ့ (OR, 0.45; 95% CI, 0.27 အထက်တန်းကျောင်းပညာရေးနှင့်အတူသူများ, ပညာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း အထက်တန်းကျောင်းထက်လျော့နည်းနှင့်အတူ 0.74% CI, 0.47-95) အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း၏လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်၏အနိမ့်အလေးသာခဲ့တိုကျတှနျးထားသနှင့်တစ်ဦးချင်းစီထက်အပြုအမူတွေ; -0.26), သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဂရီ (OR, 0.83 ပညာရေး။
/ လူမျိုးစုမျိုးနွယ်မှလေးစားမှုနှင့်တကွ, အနက်ရောင်ကတခြား, နှင့်ဟစ်စပန်းနစ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်သူကိုတစ်ဦးချင်းစီ 2.50 (95% CI, 1.69-3.70), 2.02 (95% CI, 1.22-3.33), နှင့် 1.84 (95% CI, 1.27-2.65 ခဲ့ကြသည် ) ဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်အသီးသီး, အဖြူတစ်ဦးချင်းစီအခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ထောက်ခံမှထက်ကတိုကျတှနျးနှင့်အပြုအမူ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိင်ကွဲတစ်ဦးချင်းစီလိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုး, သို့မဟုတ်အခြားအဖြစ်ဖော်ထုတ်တဲ့သူတွေကိုထက်အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောများ၏အနိမ့်အလေးသာခဲ့တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူ။ လိင်ကွဲတစ်ဦးချင်းစီမှဆွေမျိုး, လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူတစ်ဦးချင်းစီ 2.92 (95% CI, 1.51-5.66) ဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြသည်, ရိုးရိုးတစ်ဦးချင်းစီ 3.02 (95% CI, 1.80-5.04) ဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏နှင့်အခြားအဖြစ်ဖော်ထုတ်သူကိုတစ်ဦးချင်းစီ (4.33 ခဲ့ကြသည် 95% အခက်အခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲထောက်ခံပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ် CI, 1.95-9.61) ကြိမ်, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူ။ သည်အခြားသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့သည်အမှတ် (P အားလုံးအတွက်> .05) ။
ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုမှန်ကန်စွာ CSB တစ်ခုကပ်ရောဂါကြောင်းယူဆခဲ့သလဲ ရလဒ်များ, လူတွေတစ်သိသိသာသာအချိုးအစား (ယောက်ျားမိန်းမတို့၏ 10.3% ၏ 7.0%) အခက်အခဲဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ရှိသည်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ရိပ်မိကြောင်းအကြံပြုတိုကျတှနျးထား, သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့် / သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်စေသည်တစ်လမ်းအတွက်အပြုအမူတွေ။ တစ်ဦးကပိုပြီးယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ရှင်းပြချက်ဟာ CSBI-13 ၏လက်တွေ့ဖြတ်အမှတ်တွေ့ဆုံခဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီပြဿနာဒါပေမယ့် nonclinical Out-of-ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေ CSBD ၏လက်တွေ့ရောဂါအထိ CSB ၏တစ်ခုလုံးကိုအကွာအဝေးကိုဖမ်းယူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကအခက်အခဲတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်, တိုကျတှနျးထားကြောင်းအကြံပြုနှင့်အပြုအမူတစ်ခု sociocultural ပြဿနာနှင့်လက်တွေ့ရောဂါ (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးလက်တွေ့ရောဂါ vs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ဖိုးများကိုလှည့်ပတ် sociocultural နှင့် intrapersonal ပဋိပက္ခများကိုတစ်ပေါ်ထွန်းခြင်းနှစ်ဦးစလုံးအားကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါ CSBD ၏) ။ ထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေနေသောလူမျိုး၏မြင့်အရေအတွက်သတိပေးချက်ဖြစ်သင့်နှင့်ဂရုတစိုက်ပြဿနာ၏သဘောသဘာဝအကဲဖြတ်ရန်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်သော etiology စဉ်းစားပါ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သင့်တော်သောကုသမှုကိုရှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အခက်အခဲတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောကျားမကွဲပြားမှု, တိုကျတှနျးထားကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, အပြုအမူတွေကိုယခင်ကတွေးဆထက်အများကြီးသေးငယ်ခဲ့ကြသည်။20,21 အမျိုးသားများအတွက်သာ 54% သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသက်သေ (OR, 1.54; 95% CI, 1.15-2.06) ကိုလက်တွေ့မျက်နှာပြင်ဖြတ်အမှတ်တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုနမူနာ၏ 41% အဘို့မှတ်သောမိန်းမတို့ထက်လက်တွေ့ဖြတ်အမှတ်တွေ့ဆုံ၏။ CSBD အချို့သုတေသီများအခ်ါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, arousal ၏လွယ်ကူခြင်းနှင့်ပေါ့ပေါ့လိင်ဆီသို့ပိုပြီးအလိုလိုသဘောထားများနှင့် ပတ်သက်. အထီးလိင်အတွက်ကွဲပြားမှုမှထောက်ပြခဲ့ကြပေမယ့်အမျိုးသမီးများ, မရေပါပြီထက်လူတို့တွင်ပိုပြီးအဖြစ်များဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းအယူအဆဖြောင့်မတ်ရှင်းလင်းချက်။4 ထိုသို့သောရှင်းလင်းချက် "irrepressible" အဖြစ်ပုလ်သဘောတရား (ဆိုလိုသည်မှာယောက်ျားလိင်၏ Conceptual အခြေခံသော sociosexual ယဉ်ကျေးမှုသို့အသာပုတ်ပါ22) နှင့် "ဆိုင်များတွင်" လူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖို့ပို access ကိုရသောအခါအကြံပြု22 သူတို့ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤ ", လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတံခါးစောင့်" ဟုအဆိုပါအဖြစ်အမြိုးသမီးမြားခြေတစ်လှမ်းကြောင်းဣတ္သဘောတရားမတူဘဲ၌တည်ရှိ၏22 သူကိုစစ်ဆေးမှုများအတွက်သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်မျှော်လင့်ထားကြသည်နှင့်, အရှင်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်။
မကြာသေးမီယဉ်ကျေးမှုအင်တာနက်မှတစ်ဆင့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားရပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်နှင့်ပေါ့ပေါ့လိင်မှအသုံးပြုနိုင်စွမ်းအတွက်ပြန့်ပွားပိုအလိုလိုဖြစ်လာဆီသို့ဆိုင်း, ဆော့ဖ်ဝဲ application များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာပေးထားကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့သေးငယ်တဲ့ကျား, မကွဲပြားမှုအဘို့တယောက်ဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက်သောပျံ့နှံ့ဖြစ်ပါသည် အခက်အခဲအမြိုးသမီးမြားအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်တိုးပွားလာနိုင်ပါသည်။ ကြိုတင် epidemiological ခန့်မှန်းချက်များမရှိခြင်းပေးထားထိုသို့သောတစ်ဦးရှင်းပြချက်ရမ်းနောက်ထပ်ပင်ကိုယ်မူလအကဲဖြတ်။ တနည်းအားဖြင့်, အမျိုးသမီးအကြား CSBD အပေါ်အချက်အလက်များ၏ရှားပါးမှုအခက်အခဲပေးထားသောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေကျား, မကွဲပြားမှုအမှန်တကယ်အများကြီးသေးငယ်ယူဆချက်ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီများနှင့် Clinician ကျားမနှင့်လိင်သဘောတရားနှင့် ပတ်သက်. sociocultural ဘက်လိုက်မှုမှကိုယ်ခံစွမ်းအားမဟုတ်23 ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီး CSBD လျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်အခြားလက်တွေ့ပြဿနာ (ဥပမာ, စိတ်ဒဏ်ရာ, စိတ်ကြွ, ဒါမှမဟုတ်နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ) ၏ပေါ်ထွန်းခြင်းကြောင့် conceptualize ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။24 အနာဂတ်သုတေသနများပြားလှ longitudinal data တွေကိုဆန်းစစ်ဖွငျ့ဤတွေ့ရှိချက်များကကြီးပြင်းမေးခွန်းများကို, ကျား, မစံချိန်စံညွှန်းမှကျား, မသဘောတရားနှင့်လိုက်နာမှုနှင့် concomitant psychopathology ဆနျးစစျသငျ့သညျ။
လူဦးရေအချိုးအစားဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. ကျနော်တို့အောက်ပိုင်းပညာရေးနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, အလွန်မြင့်မားသို့မဟုတ်အလွန်နိမ့်ဝင်ငွေရှိသူများ, လူမျိုးရေး / တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုအလယ်အလတ်ရှိခြင်း, အဆင့်မြင့်ပညာရေးရှိခြင်းသတင်းပေးပို့သူကိုတစ်ဦးချင်းစီထက်လက်တွေ့ဖြတ်မှတ်ဖြည့်ဆည်းဖို့ပိုဖွယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည် ဝင်ငွေနှင့်အဖြူနှင့်လိင်ကွဲဖြစ်ခြင်း။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဒုက္ခဆင်းရဲပတျဝနျးကငျြအခက်အခဲထိန်းချုပ်ထားတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်ပေါ်ရသောအတွက် sociocultural အခြေအနေတွင်နားလည်သဘောပေါက်၏အရေးပါမှုကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, CSBD ၏ sociocultural အခြေအနေတွင်လေ့လာကြပြီယနေ့အထိအနည်းငယ်လေ့လာမှုများသတိထားဖြစ်ကြသည်။13,25 သုတေသီများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုယောက်ျား, လိင်ဆက်ဆံဖက်၏သူတို့ရဲ့ပိုမိုမြင့်မားနံပါတ်များပေးထား, ပေါ့ပေါ့လိင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်အမျိုးမျိုးမှဝင်ရောက်ခွင့်ပိုမိုအလိုလိုကျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အန္တရာယ်မှာပိုပြီးဖြစ်စေခြင်းငှါစောဒကတက်ကြသည်။25 ပိုများသောမကြာသေးမီကသို့သော်သုတေသနပြုလူနည်းစုစိတ်ဖိစီးမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive များအတွက်အန္တရာယ်တိုးပွါးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်,26 နှင့်ဆက်စပ် syndemic ပြဿနာများ (ဥပမာ, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ) တစ်ဦးထိုး-မှီခိုဖက်ရှင်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုလူတို့တွင်ထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်တိုးမြှင့်။27 ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုလူနည်းစုစိတ်ဖိစီးမှု CSBD များအတွက်အန္တရာယ်တိုးပွါးနှင့် CSBD အတွက်အပိုဆောင်းအလားအလာကျန်းမာရေးညီမျှမှုအကြံပြုသောအယူအဆ corroborate ။ ထို့ကွောငျ့အ CSBD ယင်း၏ sociocultural အခြေအနေတွင်ပြင်ပအကဲဖြတ်မဖြစ်သင့်နှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးချဉ်းကပ် CSB ဖြေရှင်းရန်ပြင်ရန်လိုမည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုစစ်တမ်းနှင့်၎င်း၏နည်းစနစ်များ၏သဘောသဘာဝအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ CSBI-13 တစ်ဦးစိစစ် tool တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ CSB လက်တွေ့ syndrome ရောဂါခွဲခြားရန်၎င်း၏တိကျမှန်ကန်မှုအတွက်တိုင်းတာခြင်းအမှားသက်သေသိရသည်။ ကျွန်တော်တို့ (CSBI-79 ၏ 13% တိကျမှန်ကန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး) စကေးတိုင်းတာအမှားအဘို့အကောင့်တောင်မှလျှင်, ခန့်မှန်းချက် (8.6%) ယခင်ကခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်နှင့်အခြားစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ (ဥပမာဆိုစိတ်ကျရောဂါရောဂါပျံ့နှံ့မှု၏ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်ထက်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်နေဆဲ 5.7% ဖြစ်ပါသည်28) ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ NHSSB မြင့်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုအနက်ကိုဘော်ပြရနျကြှနျုပျတို့၏စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ထားသောထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းထက်ကျော်လွန်သင်တန်းသားများကို '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ရောက်သောအပိုဆောင်းအကြောင်းတရားများအကဲဖြတ်ရန်ခဲ့ပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းလိင်နှင့်ကျား, မ, လိင်ပဋိပက္ခများနှင့်အချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်း (ဥပမာ, စိတ်ကြွရောဂါ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပြဿနာများ, obsessive-compulsive ရောဂါ) အကြောင်း sociocultural စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ဆက်စပ်သောခေါ်ဆောင်သွားပဋိပက္ခများကို CSBD ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှင်းပြပေမည်။ ဤသည်မှာအနာဂတ်သုတေသနအတွက်အရေးပါသော Avenue ကိုယ်စားပြုတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလေ့လာမှု sociodemographic ကွဲပြားခြားနားမှုဘက်လိုက်မှုစကေးကြောင့်ခဲ့ကြသည်ရှိမရှိထွက်မအုပ်စိုးလို့မရဘူး။ သို့သော်စကေးဘက်လိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေအတွင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပကွဲပြားခြားနားလူဦးရေအတွက်, ဘာသာပြန်ထားသောအတည်ပြု, လေ့လာခဲ့ကြသော CSBI ၏များပြားလှဗားရှင်းအားဖြင့်လျော့ပါးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကပထမဦးဆုံးကျနော်တို့အခက်အခဲတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အပြုအမူတွေ-The CSBD ၏သော့ချက်အင်္ဂါရပ်ကိုထိန်းချုပ်နဲ့ဆက်စပ်ရောက်သောအမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးပျံ့နှံ့မှတ်တမ်းတင်သိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာ၏မြင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ sociocultural ပြဿနာအဖြစ်အဓိကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆက်စပ်မှုရှိပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများထံမှအာရုံကိုအချက်ကိုခိုင်လုံမှုကြောင့်သိသိသာသာလက်တွေ့ပြဿနာဖော်ပြသည်။ ထိုမှတပါး, ကျား, မ, လိင်, ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးရေးနှင့်ဝင်ငွေကွဲပြားခြားနားမှုအလားအလာကျန်းမာရေးညီမျှမှုအကြံပြု, CSBD ၏ sociocultural အခြေအနေတွင်၏ salience မှအမှတ်နှင့်လူနည်းစုနျြးမာရေးအတှကျအကောင့်တစ်ခုကိုကုသမှုချဉ်းကပ်မှု, ကျားမသဘောတရားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် sociocultural စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တန်ဖိုးများအဘို့အငြင်း လိင်နှင့်ကျား, မ။ ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေနေသောလူမျိုး၏မြင့်အရေအတွက်သတိပေးချက်ဖြစ်ဂရုတစိုက်ပြဿနာ၏သဘောသဘာဝအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သင့်တော်သောကုသမှုကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
ပြည်သူများအဘို့အလက်ခံခဲ့သည်: စက်တင်ဘာလ 13, 2018 ။
Published: နိုဝင်ဘာလ 9, 2018 ။ Doi:10.1001 / jamanetworkopen.2018.4468
ပွင့်လင်း Access ကို: ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေကာပွင့်လင်း access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် CC-BY လိုင်စင်။ © 2018 Dickenson ဂျေအေ et al ။ ဂျေအေအမ်အေကွန်ယက်ဖွင့်ပါ.
သက်ဆိုင်ရာ Author: Janna အေ Dickenson, Ph.D, လူ့လိင်, မိသားစုဆေးပညာနှင့်ရပ်ရွာကျန်းမာရေး, မင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ် 1300 S ကို 2nd St, Ste 180, Minneapolis, MN 55454 (ဦးစီးဌာနအတွက်အစီအစဉ်[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]).
စာရေးသူထောက်ပံ့: ဒေါက်တာ Coleman လေ့လာမှုအတွက်အချက်အလက်များ၏လူအပေါင်းတို့အားအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်ခဲ့များနှင့်ဒေတာများ၏သမာဓိနှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုများအတွက်တာဝန်ကြာပါသည်။
အယူအဆနှင့်ဒီဇိုင်း: Dickenson, Coleman, Miner ။
သိမ်းယူမှု, analysis သို့မဟုတ်အချက်အလက်များ၏အနက်: အားလုံးစာရေးဆရာများ။
လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏မူကြမ်းရေးဆွဲ: Dickenson, Coleman ။
စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: Dickenson, Gleason ။
, အုပ်ချုပ်ရေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းထောက်ခံမှု: အားလုံးစာရေးဆရာများ။
ကြီးကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း: Coleman ။
အကျိုးစီးပွားထုတ်ဖော်၏ပဋိပက္ခ: ဒေါက်တာ Coleman သည် Church & Dwight Co. , Inc နှင့် Roman, Inc တို့၏အကြံပေးကောင်စီ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး Church & Dwight Co. , Inc နှင့် Roman, Inc တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခကြေးငွေများကိုတင်ပြထားသည့်အလုပ်အပြင်ဘက်တွင်တင်ပြခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားထုတ်ဖော်အစီရင်ခံခဲ့သည်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း / ပံ့ပိုးမှု: လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအမျိုးသားစစ်တမ်းကို Church & Dwight Co, Inc မှထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုသည်ဤစစ်တမ်း၏ရန်ပုံငွေမထောက်ပံ့သည့်နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါငွေကြေးထောက်ပံ့ / စပွန်ဆာအခန်းက္ပ: အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအမျိုးသားစစ်တမ်း၏ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အပြုအမူလက်ရှိလေ့လာမှု၏ဒီဇိုင်းနှင့်အကငျြ့မအခန်းကဏ္ဍရ၏ စုဆောင်းခြင်း, စီမံခန့်ခွဲမှု, analysis နှင့်ဒေတာများအနက်; လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှု, ပြန်လည်သုံးသပ်, ဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုချက်; နှင့်ထုတ်ဝေများအတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တင်ပြရန်ဆုံးဖြတ်ချက်။
အပိုဆောင်းထောက်ပံ့: Debra Herbenick, PhD, Indiana တက္ကသိုလ်မှလိင်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးစင်တာ၏ဒါရိုက်တာသည်လိင်မှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအမျိုးသားစစ်တမ်းတွင်မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစာရင်း -၁၃ ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ စစ်တမ်းကိုပံ့ပိုးပေးသော Church & Dwight Co. , Inc မှထောက်ပံ့ငွေဖြင့်သူမအားလျော်ကြေးငွေပေးခဲ့သည်။
Lee C. လိင်စွဲကပ်မှု။ Newsweek ။ နိုဝင်ဘာလ 25, 2011 ။ https://www.newsweek.com/sex-addiction-epidemic-66289။ စက်တင်ဘာလ 7, 2018 ဝင်ရောက်။
Braun-Harvey: D, Vigorito MA ။ ထိန်းချုပ်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထဲကကုသပေးနေ: ပြန်လည်စဉ်းစားလိင်စွဲလမ်း။ နယူးယောက်, NY: Springer ထုတ်ဝေရေး Co. ,; 2015 ။
Coleman E. သင်၏လူနာသည်မလိင်အင်္ဂါအပြုအမူအားဖြင့်ခံစားနေရပါသလား။ စိတ်ရောဂါအမ်း. 1992;22(6):320-325. doi:10.3928/0048-5713-19920601-09Google ScholarCrossref
Kafka အမတ် Hypersexual ရောဂါ: များအတွက်အဆိုပြုရောဂါ DSM-V ကို. Arch လိင်ပြုမူနေ. 2010;39(2):377-400. doi:10.1007/s10508-009-9574-7PubMedGoogle ScholarCrossref
Carnes P. အရိပ်ထဲကထုတ်: နားလည်မှုလိင်စွဲလမ်း။ Center ကိုစီးတီး, MN: Hazelden ထုတ်ဝေရေး; 2001 ။
Kaplan က MS, Krueger RB ။ hypersexuality ၏ရောဂါ, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု။ J ကိုလိင် Res. 2010;47(2):181-198. doi:10.1080 / 00224491003592863PubMedGoogle ScholarCrossref
Kraus SW, Krueger RB, Briken P, et al ။ အတွင်း compulsive လိင်အပြုအမူရောဂါ ICD-11. ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု. 2018;17(1):109-110. doi:10.1002 / wps.20499PubMedGoogle ScholarCrossref
Skegg K, Nada-Raja S, Dickson N, Paul C. Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study မှအရွယ်ရောက်ပြီးလူငယ်များအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကို“ မထိန်းချုပ်နိုင်” ရိပ်မိနေသည်။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2010;39(4):968-978. doi:10.1007/s10508-009-9504-8PubMedGoogle ScholarCrossref
Coleman အီး, Swinburne Romine R, Dickenson J, Miner MH ။ မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစာရင်း -13 ။ ခုနှစ်တွင်: Milhausen RR, Sakaluk JK, Fisher က TD, Davis က CM, Yarber WL, eds ။ လိင်-Related ဆောင်ရွက်ချက်များ၏လက်စွဲစာအုပ်။ နယူးယောက်, NY: Routledge ။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
Coleman E, Miner M, Ohlerking F, Raymond N. မသင်မနေရလိင်အပြုအမူစာရင်း - ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှုကိုပဏာမလေ့လာမှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther. 2001;27(4):325-332. doi:10.1080 / 009262301317081070PubMedGoogle ScholarCrossref
မိုင်းလုပ်သား MH၊ Raymond N၊ Coleman E၊ Swinburne Romine R. ဆေးမင်ကြောင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစာရင်းဆိုင်ရာဆေးခန်းနှင့်သိပ္ပံနည်းကျအသုံး ၀ င်သောအချက်များကိုစစ်ဆေးခြင်း။ J ကိုလိင် Med. 2017;14(5):715-720. doi:10.1016 / j.jsxm.2017.03.255PubMedGoogle ScholarCrossref
Dodge B, Herbenick D, Fu TC, et al ။ အမေရိကန်အမျိုးသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအားမိမိကိုယ်မိမိဖော်ထုတ်ခြင်း - ၂၀၁၂ အမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအမျိုးသားစစ်တမ်းမှရလဒ်များဖြစ်သည်။ J ကိုလိင် Med. 2016;13(4):637-649. doi:10.1016 / j.jsxm.2016.01.015PubMedGoogle ScholarCrossref
Coleman E, Horvath KJ၊ Miner M, Ross MW, Oakes M, Rosser BRS; အမျိုးသား Internet လိင် (MINTS-II) အဖွဲ့။ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောက်ျားများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အန္တရာယ်ကင်းစွာလိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိခြင်း Arch လိင်ပြုမူနေ. 2010;39(5):1045-1053. doi:10.1007/s10508-009-9507-5PubMedGoogle ScholarCrossref
Miner MH၊ Coleman E၊ စင်တာ BA၊ Ross M၊ Rosser BRS အဆိုပါ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစာရင်း: psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2007;36(4):579-587. doi:10.1007/s10508-006-9127-2PubMedGoogle ScholarCrossref
McBride KR၊ Reece M၊ Sanders SA ။ Compulsive Sex Behaviour Inventory ကို အသုံးပြု၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများကိုခန့်မှန်းခြင်း။ int J ကိုလိင်ကျန်းမာရေး. 2008;19(4):51-62. doi:10.1300/J514v19n04_06Google ScholarCrossref
Storholm ED, Fisher DG, Napper LE, Reynolds GL, Halkitis PN ။ အဆိုပါ Compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Inventory တစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ လိင်စွဲ compulsive. 2011;18(2):86-103. doi:10.1080 / 10720162.2011.584057Google ScholarCrossref
et al က de Tubino Scanavino M က, Ventuneac တစ် ဦး, Rendina HJ ။ လိင်မှုဆိုင်ရာမလုပ်မနေရအချိုး၊ မလိုက်နာသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာစာရင်းနှင့် Hypersexual Disordering Inventory: ဘာသာပြန်၊ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့်ဘရာဇီးတွင်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုခြင်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2016;45(1):207-217. doi:10.1007/s10508-014-0356-5PubMedGoogle ScholarCrossref
Træen B, Noor SW, Hald GM, et al ။ နော်ဝေတွင်အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောက်ျားများအတွက်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း။ Scand J ကို Psychol. 2015;56(3):290-296. doi:10.1111 / sjop.12203PubMedGoogle ScholarCrossref
အလုပ်သမားစာရင်းအင်းအမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုများနှင့်ဗျူရို။ လက်ရှိလူဦးရေစစ်တမ်းကို။ https://www.census.gov/programs-surveys/cps.html။ ဝင်ရောက်ဇန်နဝါရီလ 18, 2018 ။
Kafka အမတ် hypersexual ရောဂါဘာဖြစ်သွားသလဲ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2014;43(7):1259-1261. doi:10.1007 / s10508-014-0326-y ကPubMedGoogle ScholarCrossref
Kuzma JM, အနက်ရောင် DW ။ ကူးစက်ရောဂါ၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာသဘာဝသမိုင်း။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်အမေရိက Am. 2008;31(4):603-611. doi:10.1016 / j.psc.2008.06.005PubMedGoogle ScholarCrossref
Tolman DL, Davis က BR, Bowman က CP ။ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ၏လိင်ကွဲဆက်ဆံမှုများတွင်ပုဂိ်္ဂုလ်နှင့်inတ္ထိယဝါဒသဘောတရားများကိုကျား၊ J ကိုမြီးကောင်ပေါက် Res. 2016;31(1):3-31. doi:10.1177 / 0743558415587325Google ScholarCrossref
Carvalho J, Guerra L, Neves S, Nobre PJ ။ အမျိုးသမီးမဟုတ်သောနမူနာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုကိုဖော်ပြသည့်စိတ်ပညာဆိုင်ရာခန့်မှန်းသူများ။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther. 2015;41(5):467-480. doi:10.1080 / 0092623X.2014.920755PubMedGoogle ScholarCrossref
Ferree MC ။ အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်စွဲမှု - ဒဏ္myာရီများနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ။ လိင်စွဲ compulsive. 2001;8(3-4):287-300. doi:10.1080 / 107201601753459973Google ScholarCrossref
Parsons JT, Kelly BC, Bimbi DS, DiMaria L, Wainberg ML, Morgenstern J. လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်နှစ်မျိုးလုံးအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၏ရင်းမြစ်များအတွက်ရှင်းလင်းချက်များ။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2008;37(5):817-826. doi:10.1007/s10508-007-9218-8PubMedGoogle ScholarCrossref
ရွန်နီ BM၊ Tulloch TG၊ Blashill AJ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးယောက်ျားနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောက်ျားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှု - meta-analysis ။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2018;47(1):75-93. doi:10.1007/s10508-017-1032-3PubMedGoogle ScholarCrossref
Parsons JT, Rendina HJ, Moody RL, Ventuneac A, Grov C. Syndemic ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်ဆိုင်ရာလိင်တူဆက်ဆံသူနှင့်လိင်ခြားသူများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း - အုပ်စုသုံးစုကိုသဘောပေါက်ခြင်းအတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား။ Arch လိင်ပြုမူနေ. 2015;44(7):1903-1913. doi:10.1007/s10508-015-0574-5PubMedGoogle ScholarCrossref
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ စီးပွားပျက်ကပ်နှင့်အခြားအသုံးများသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders: ကမ္တာ့ကျန်းမာရေးခန့်မှန်း။ ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့; 2017 ။ http://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/။ စက်တင်ဘာလ 7, 2018 ဝင်ရောက်။